Shudder gafere otu nde nde ndebanye aha Mark. iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Shudder gafere otu nde nde ndebanye aha
Shudder gafere otu nde nde ndebanye aha
by Waylon Jọdan September 22, 2020
by Waylon Jọdan September 22, 2020 884 echiche
AMC niile egwu / egwu egwu na-agba ọsọ, Shudder, kwupụtara n'ụtụtụ a na ha karịrị akara nde nde ndebanye aha nde 1. Ọrụ a anọgidewo na-ewulite ndị otu ya ebe ọ bụ na ọ pụtara na ọhaneze laghachiri na 2016, mana ọ hụrụ nnukwu mmụba na afọ gara aga na mgbakwunye nke usoro mmemme mbụ ya.
"Ihe mgbakwunye nke usoro ihe nkiri na ihe nkiri mbụ mere ka uto anyị too wee gbanwee Shudder ka ọ bụrụ ọrụ ga-adịrị onye ọ bụla nwere mmasị na oke egwu, egwu egwu ma ọ bụ ntụrụndụ karịrị nke mmadụ," Miguel Penella, AMC Networks SVOD President kwuru na nkwupụta anyị natara n'ụtụtụ a. “Anyị ilekwasị anya na mmemme mmemme, ọdịnaya na-achọpụta ihe na ịchọta ndị okike kachasị mma na-abịa emeela ka Shudder nwee ike ịbanye na ụwa nke ọrụ ndenye aha. Ihe ịga nke ọma nke Shudder na-abịa dị ka ọrụ SVOD anyị ndị ọzọ ezubere iche-Acorn TV, Sundance Now na UMC-na-aga n'ihu n'ike n'ike ha na-eto ngwa ngwa site na ndị na-elekọta ndị na-anụ ọkụ n'obi na ọdịnaya ha kacha hụ n'anya.
Ọdịnaya ahụ gụnyere usoro ihe mgbe ochie nke afọ gara aga Creepshow, dabere n'ihe nkiri George A. Romero / Stephen King mbụ sitere na 1982 nakwa nke afọ a Onye ọbịa, ihe nkiri edere, gbaa, ma wepụta naanị n'ime izu iri na abụọ n'oge iche iche nke a na-ede ugbu a dị ka ihe nkiri # 12 nke afọ na Tomato Rotten.
Giancarlo Esposito na premiere nwunye nke Shudder's Creepshow
Na mgbakwunye na mmemme nke izizi na nke pụrụ iche, ha na-emelitekwa ihe nkiri ha na kpochapụla ọnwa ọ bụla iji mee ka onyinye ha dị ọhụrụ na ndị debanyere aha ha na-abịaghachi maka ọtụtụ.
Ọrụ gụgharia ekwenyela na mmụba ya na mpaghara ọhụụ na-enyere aka ntinye aka na ndenye aha ya. Mgbe mbụ ọ malitere, Shudder dị naanị na US, Canada, na UK mana ka ọ gbasasịrị na Germany na mbido afọ a ha kwagara New Zealand na Australia. Ndị ọrụ nwere ike ịlele site na ebe nrụọrụ weebụ ha, mana ọrụ ahụ dịkwa na Roku, Fire TV, Apple TV, na XBox yana ịnwe "ọwa" nke ha na ngwa Apple TV na Amazon Prime na mpaghara ụfọdụ.
You bụ onye debanyere aha Shudder? Gwa anyị ihe ị hụrụ n'anya gbasara ya na nkọwa!